HomeKit muIOS 14 ichavandudza kuzivikanwa kwechiso, wedzera Night Shift uye nekuvandudza odhiyo yeiyo HomePod | IPhone nhau
Uye ndezvekuti isu tinoenderera nekudonha kwe9to5Mac, mavakaronga kuburitsa zvese zvavanogona nezve IOS 14 kodhi uye nguva ino inguva yeKeKKit. Sezvinotsanangurwa neanozivikanwa wepakati, kumeso kumeso, iyo Night Shift sarudzo uye akasiyana siyana odhiyo ekuvandudza kubva kuTV yeiyo HomePod ichawedzerwa.
Asi ngatiendei nhanho uye tione kuti izvi zvese zvavanotaura zvinorevei 9to5Mac. Chinhu chekutanga ndechekuti isu tichava nekuvandudza mukuzivikanwa kwechiso mu HomeKit inoenderana kamera kana zvasvika pakuzviziva isu pachedu, mhuka, zvinhu kana zviso zvinozivikanwa. Nenzira iyi, zvese zvine chekuita nekushanda kwemakamera uye nehurongwa hwekuziva zvichavandudzwa. Kune rimwe divi, iyo Night Shift sarudzo inosvika mune inotevera vhezheni yesisitimu yekushandisa, saka izvi zvinogona kushandurirwa mukati kuchinjika kwemwenje yenzvimbo yedu kana chishandiso chashanduka nehurongwa kana nzira yemanyorerwo kugadzira nharaunda yakavandudzwa.
Chekupedzisira, iyo sarudzo yekuvandudza odhiyo yeiyo HomePod yaizobatanidzwa kune ayo anoshandisa aya masipika sezvinobuda muterevhizheni. Parizvino haisi iyo inokurudzirwa zvakanyanya nekuda kwezvikonzero zvakati wandei asi izvo zvinogara zvichidonhedzwa uye odhiyo yakawanikwa yaisazove yakanakisa kunakirwa neodhiyo mhando kuenderana. Naizvozvo, mune inotevera vhezheni yeIOS 14 zvinoita sekunge hunhu hweaya Apple smart maspika angavandudzika.
Isu tinoenderera mberi nekuparara kwekudonha kubva pawebhusaiti zvinoita kunge zvisina magumo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » HomeKit muIOS 14 ichavandudza kuzivikanwa kwechiso, wedzera Night Shift uye nekuvandudza odhiyo yeiyo HomePod
iOS 14 inoratidza iPhone 9, itsva iPad Pro, AirTags uye nyowani kure kure yeApple TV